Compress pdf: programa sy tranokala hampihenana ny lanjan'ny pdfs | Famoronana an-tserasera
Alao an-tsaina hoe nanomana antontan-taratasy ianao ary rehefa nitahiry dia nahavita endrika PDF. Tonga lafatra ho anao izy io, miaraka amin'ny latabatra, statistika, sary ary lahatsoratra maneho ny zava-drehetra. Fa rehefa tonga ny fotoana handefasana azy, horohoro! Mavesatra loatra izany. Azo antoka fa tamin'ny fotoana sasany dia sendra an'ity toe-javatra ity ianao ary tsy maintsy nanatona azy ireo hametahana PDF ary hahafahanao mandefa izany any amin'ilay olona tokony ho tonga.
Raha nahita ny tenanao hita taratra tamin'ity toe-javatra ity ianao ary zavatra nitranga taminao izany, na izay manjo anao matetika, dia ilaina tokoa ny manana fitaovana hangeja PDF. Noho izany, eto izahay dia hiresaka momba ny vahaolana sasantsasany amin'ity olana mahazo anao ity.
1 Ampidino mora foana ny PDF
2 Ataovy mametaka PDF amin'ny programa
3 Mametaka PDF an-tserasera
4 Ampidino PDF amin'ny Android na iOS
Ampidino mora foana ny PDF
Betsaka ny serivisy izay, rehefa mandefa antontan-taratasy, dia ferana ny habeny ary mahatonga anao tsy maintsy mampiasa rafitra hafa handefasana azy ireo. Fa raha tsy te-handefa rohy amin'ny mpanjifa ianao ary hanome "sary ratsy" amin'ny alàlan'ny fankanesany any amin'ny tranokala hafa hisintona ny antontan-taratasy nangatahiny, ny safidy dia ny famoretana PDF.
Tsy dia sarotra araka ny fahitana azy io, ary miankina amin'ny kalitao tianao homena ny antontan-taratasy farany, ary koa izay avelan'ny programa, dia afaka manampy anao ianao miaraka amin'izy ireo. Mazava ho azy, manana safidy maro ianao, na programa na pejy web izay hanampy anao hampihena ny haben'io pdf io. Tianao ve ny hanomezanay torohevitra sasany?
Ataovy mametaka PDF amin'ny programa
Ity dia iray amin'ireo programa voalohany atolotray, ary ataonay izany satria, ankoatr'izay lazain'ny anarany, izay reducer PDF, ka noho izany dia hangeja PDF ianao ary hampihena ny habeny, mamela anao koa izy hanambatra PDF maromaro miaraka amin'izay na koa manasaraka azy roa. Fa misy bebe kokoa: azonao atao ny mamafa pejy, manampy watermarks, manamboatra ny pejy sns.
Ny olana fotsiny dia amin'ny teny anglisy sy frantsay ihany no misy azy, saingy mora ny miasa, na dia kely aza ny anglisy azonao.
Amin'ity tranga ity, ity programa ity dia mifantoka amin'ny lahasa iray ihany, manery ny PDF. Mazava ho azy, azonao atao ny mamehy tsirairay na maromaro. Ankoatr'izay, miavaka izy satria na dia mamikitra be sy haingana aza izy io, tsy midika izany fa very ny kalitao na ny endrika, izay raisina an-tanan-droa.
Ankehitriny, ny lafy ratsy dia voaloa. Misy ny kinova maimaimpoana, azonao ampiasaina, saingy voafetra kokoa noho ny karama izy io, ary mety hisy fiantraikany aminao eo amin'ny fetran'ny lanjany, rehefa mamehy sns. Raha ny amin'ny fiteny dia amin'ny teny anglisy ihany no ahitanao azy, saingy azony tsara.
Raha mila famatrarana somary avo ianao, hatramin'ny 95%, dia andramo ny mampiasa an'ity safidy ity. NXPowerLite Desktop dia programa miaraka amina interface tsotra sy mora ampiasaina. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manampy rakitra na lahatahiry hamehezana, izay tsy mijanona amin'ny PDF fotsiny fa manome safidy bebe kokoa hisafidianana.
Rehefa misintona azy ianao dia afaka misafidy kinova maromaro, mifototra amin'ny zavatra ilainao, ary amin'izany dia tsy ho very toerana amin'ny kapila mafy ianao raha tsy mila azy manontolo.
Mametaka PDF an-tserasera
Raha tsy te-hisintona olana ianao ary mila mametraka azy amin'ny solosainao, ny fomba iray hafa anaovana izany dia amin'ny alàlan'ny fitaovana an-tserasera atolotra amin'ny pejy maro.
Manokana ireto manaraka ireto:
Efa niresaka taminao matetika momba an'ity fitaovana ity izahay, ary tsy vitan'ny hoe mampita endrika antontan-taratasy iray hafa ity; azonao atao koa ny mamehy PDF. Mba hanaovana izany dia mamela anao hisafidy ny kalitaon'ny faneriterena tadiavinao, ary hangeja azy mivantana, na avy amin'ny Dropbox na Drive, ka tsy mila mampakatra zavatra hafa ianao.
Mazava ho azy, rehefa rakitra be dia be izy ireo, indraindray dia hanome anao olana izany ary tsy azo fehezina tsara satria manome lesoka.
Fitaovana iray hafa efa noresahinay taminao ny SmallPDF. Ity tranokala ity dia tsy mamela anao hiova endrika, fa afaka mametaka PDf mora foana koa. Mazava ho azy, toy ny teo aloha ihany, dia misy fotoana indraindray raha mihoatra ny 100MB ny antontan-taratasy PDF dia tsy tanterahina ny famoretana, satria tsy vitan'ny tranonkala ny manao azy; fa raha vitsy izy ireo dia tsy tokony hanome anao olana momba izany.
Ny hany zavatra ilainao dia ny mampakatra ny rakitra PDF ary miandrasa minitra vitsy hamoahana azy, na dia azonao atao aza ny manery azy mivantana ao amin'ny Google Drive na Dropbox.
Ny fihoaram-pefy iray hafa dia ny ahafahanao mamehy rakitra roa isaky ny mandeha; Voafetra ny fampiasana ny fitaovana, ka raha mila mametaka PDF maromaro ianao, safidy hafa (programa) no mora kokoa aminao.
Raha mitady fitaovana izay ankoatry ny famoretana ianao, dia mamela anao hanova ny PDF an-tserasera, dia tokony hanandrana PDFZorro ianao. Raha ny tena izy dia tonian-dahatsoratra PDF izy, saingy, anisan'ireo asany, tsy maintsy mamehy PDF ianao.
Manana izany amin'ny tranokala ianao fa misy koa plugin iray azonao apetraka ao amin'ny Google Chrome mba hamehezana ireo rakitra voatahiry ao amin'ny Google Drive.
Ampidino PDF amin'ny Android na iOS
Ary farany, raha iray amin'ireo mampiasa tablette na smartphone ianao hiasana, tsy mampaninona mihitsy ny manana compresseur hafahafa eny an-tanana, sa tsy izany?
Manoro hevitra izao manaraka izao izahay:
Fitaovana PDF. Ho an'ny Android ity, fampiharana iray ahafahanao mamehy PDF nefa koa mizara, manambatra na manova na manakana endrika hafa. Mazava ho azy fa manana kinova maimaimpoana sy kinova pro ianao, saingy mendrika izany raha ampiasainao betsaka.
PDF Compressor iOS. Io dia mitovy amin'ilay programa noresahintsika teo aloha. Izy io dia rindrambaiko ahafahanao manery ny PDF na amin'ny misaraka na amin'ny andiany. Azonao atao koa ny manova PDF ho Word.
Araka ny hitanao dia misy safidy maro hanindriana PDF ka amin'ny fotoana ilanao azy dia azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireto fitaovana ireto hahatratrarana azy. Manoro hevitra anao izahay, araka izay azo atao, rehefa manangana ny PDF ianao dia manandrana mampiasa sary avo lenta nefa kely lanja, ary koa latabatra ... amin'izay tsy dia mavesatra loatra (na dia fotoana fohy aza ianao handeha hamonjy, dia ho mendrika foana izany).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Compress pdf